Stop Stealing Our Future! ဒါတို့ ရဲ့ မနက်ဖြန် | Cornfields to Copenhagen
Stop Stealing Our Future! ဒါတို့ ရဲ့ မနက်ဖြန်
While thousands filled Bella Center with their optimism, Lord Monckton,aleading climate denier, attempted to leadawebcasted climate-denier event nearby as part of Americans for Prosperity’s “Hot Air Tour: LIVE from Copenhagen.” Soon after the event began, nearly fifty youth from SustainUS, the Sierra Student Coalition, the Cascade Climate Network, and other youth NGOs took over the stage, chanting and wavinga“Clean Energy Now” banner. The disrupted meeting was viewed by more than 40 climate denier rallies by webcast. Lord Monckton desperately continued his speech calling the young protesters “crazed Hitler youth” and “Nazis”.
In fact, there were few attendees other than the youth climate activists. The climate activists said they were sick of coal-industry-funded fake campaigns which endanger their future and prevent Americans from savoring the fruits of green industry.
Following is the translation in Myanmar.
စကန်ဒီနေးဗီးယားရဲ့ နာမည်ကျော် Bella Center ရဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမတွေထဲမှာ ကမ္ဘာ
လုံးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရဖို့ ကိုယ်စားလှယ်တော်တွေအကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးနေကြတုန်း ဒီဇင်ဘာ ၉ရက်နေ့ ညနေခင်းမှာတော့ ဒီအစည်းအဝေးကြီးကိုဆန့် ကျင်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၁ခုပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
နာမည်ကြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ၁ခုက ကမကထလုပ်ပေးပီး Lord Mackton ဆို တဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆန့် ကျင်သူကပြောကြားတာပါ။ သနားစရာ Mackton ၁ယောက် ပွဲစလို့ မှ ၅မိနစ်မကြာလိုက်ဘူး အလျှိုလျှိုရောက်လာတဲ့ အမေရိကန်လူငယ် ၅၀ရဲ့ ဆန်ဒပြတိုက်ခိုက်မှုကိုဒဏ်ကိုအလူးအလဲခံလိုက်ရရှာပါတယ်။
နဲနဲ ချင်းဆီခွဲဝင်လာတဲ့ လူငယ်လေးတွေ ဟာ စကားပြောစင်ပေါ်မှာ ပတ်ထားတဲ့ပိုစတာကိုဆွဲဖြဲတဲ့ လူကဖြဲ၊ စတိတ်စင်ပေါ်ကိုပြေးတက်တဲ့ လူကတက်၊ အော်တဲ့ လူကအော်နဲ့ ဆူညံပွက်လောရိုက်သွားပါတယ်။
ဒီ ကိုပေဟီဂန် Climate Change Confernce ကိုလာတဲ့အမေရိကန်လုငယ်ပေါင်း ၃၅၀ရှိပါတယ်။ Sustain US, Young Friends of the Earth, Climate Action Network အစရှိတဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတျွေကကိုယ်စားလှယ်တော်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ က ဒီလို ရေနံ companyတွေရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ လူတွေကို အမှန်ကိုမမြင်နိုင်အောင်မဲဆွယ်တရားဟောနေတဲ့ူပွဲတွေကိုသူတို့ ဘယ်နည်းနဲ့ မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးတဲ့ ။ သူတို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့ အချိန်မှာဒီလို နှောင့်ယှက်တာဟာ သူတို့ မျိုးဆက်ကိုရောနောင်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်လေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ဖျက်ဆီးနေတာပါတဲ့ ။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ အနေနဲ့ဒီလို့ အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကိုဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ပါဘူးတဲ့ ။
← The COP-15 Circus
EU to regroup in Brussels →
kelsey kauffman permalink*
12/10/09 5:15 pm
Though I think the climate deniers are wrong, I wish the American protesters had not disrupted the meeting. I don’t like incivility, no matter which side is being uncivil. The climate change-deniers should have the right to express their views, hold meetings, etc. The students disrupting the meeting remind me of the right-wing people this past summer who hurled abuse at US congressmen this summer who favored health care reform. Interesting post though!